Wasiirka Maaliyada DDSI Iyo Shaqaalaha Ururka Horumarinta Soomalida Itoobiya Oo Xaflad Casho Sharaf Ah U Sameeyay Wakiiladii Qurba Joogta Uga Qaybgalay Shirwaynihii 8aad ee XDSHSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Isniin.20.Oct.2014, Waxaa xaqiiq ah in shirwaynihii taariikhiga ahaa ee XDSHSI ee lagu qabtay xarunta gobolka Nogob ee magaalad Fiiq ay siwayn u soo dhaweeyeen dhamaanba shacabka deegaanka Somalida Itoobiya dalka gudihiisa iyo dhamaanba qaaradaha aduunka iyaga oo qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku nool dhamaan qaaradaha aduunka ay qabsateen shirar iyo xaflada lagu taageerayo shirwaynihii 8aad ee XDSHSI iyo go’aanadii dhaxal galka ka ahaa ee ka soo baxayba.
Xafladahan loogu dabaal dagayo laguna taageerayo sidii habsamida lahayd ee shirwaynihii 8aad ee xisbiga uga dhacay xarunta gobolka nogob ayaa ka socda xarunta deegaanka iyo dhamaanba gobolada dalka iyo degmooyinkaba waxaana habeenkii xalay ahaa loogu sameeyay Nogob huteel xaflad casho sharaf ah, wakiiladii uga qaybgalay shirwaynihii 8aad ee XDSHSI dhamaanba qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku nool dhamaan qaaradaha kala duwan ee aduunka.
Xafladan casho sharafta ah oo uu soo diyaariyay ururka horumarinta somalida itoobiya(UHSI) ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha DDSI mudane Axmed Cabdi Maxamed, agaasinada iyo shaqaalaha ururka horumarinta Somalida Itoobiya oo uu ugu horeeyo mudane Najiib Cabdi Xasan, wakiilada qurba joogta ee loo sameeyay casho sharafta iyo mari sharaf kale.
Wasiirka maaliyada mudane Axmed Cabdi Maxamed iyo Mudane Najiib Cabdi Xasan ayaa ugu horayntii u mahad celiyya dhamaanba qurba joogta u dhalatay deegaanka sida meeqaamka sare ah ee ay uga qaybqaataan horumarka xawliga ah ee sida balaadhan uga socda guud ahaanba deegaanka.
Mudane Najiib Cabdi Xasan ayaa qurba joogtan fahan durugsan ka siiyay qorshayaasha iyo ujeedooyinka loo aas aasay ururka horumarinta soomalida itoobiya iyo waliba qorshayaasha kaga aadan qurba joogta u dhalatay deegaanka. wuxuuna ka waramay in ay dawladu dadaal dheeriya ugu jirto kor u qaadida nolosha iyo dhaqaalaha shacabka si taasi loo buuxiyo ayaa waxaa la aas aasay ururka horumarinta somalida itoobiya oo loogu talagalay in uu buuxiyo meelaha ay gol dalooladu ka jirto dhinaca horumarka.
Shaqaalaha ururka ayaa soo bandhigay warbixin dheer oo ka turjimaysa waxqabadka iyo horumarka uu sameeyay ururkani taasi oo ka durjimaysa in uu si hadsami leh uga qaybqaatay dhinacyada fidinta waxbarashada, helitaanka biyaha nadiifta ah, kor u qaadida dayada caafimaadka, tababarada iyo abuurida ilaha shaqada.
Dhanka kale wasiirka maaliyada DDSI mudane Axmed oo ka hadlay xafladan casho sharafta ayaa aad ooga mahadceliyay qurba joogtani sida dareenka wadaninomo leh ee ay uga soo qaybgaleen shirwaynihii 8aad ee XDSHSI sida ay qurba joogta u dhalatay deegaanku markasta u garabtaagan yihiin xukuumada hawlaha horumarka nabadgalyada iyo guud ahaanba kor u qaadida koboca dhaqaalaha. Wuxuuna wasiirku tilmaamay jihooyinka horumarineed ee ay xukuumadu ku socoto.
Qaarka mid ah qurba joogtani ayaa waxay si wayn u bogaadiyeen sida meeqaamka sare ah ee ay xukuumadu ugu soo dhawaysay qurba joogtan deegaanka iyo xafladahan is dabo jooga ah ee lagu maamuusayo wakiiladan qurba joogta.
Waxayna si qoto dheer uga warameen dadaalada dheer ee ay xukuumadu ugu jirto sidii shacabka deegaanka loo gaadhsiinlahaa horumar waara oo aan soo noqod lahayn iyaga oo sheegay in ay talaabooyin horumarineed tahay aas aaskii ururka horumarinta soomalida itoobiya oo durba la helay midhihiisii horumarineed waxayna balan qaadeen in ay siwayn u garabtaagan yihiin ururkan xubno fir fircoona ka noqonayaan ururkani horumarinta soomalida itoobiya.